သံလွင်: မုံရွာမြို့ အထက (၂) ဝရံတာ ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား
မုံရွာမြို့ အထက (၂) ဝရံတာ ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား
ဇူလိုင်လ၂၃ရက်နေ့ နေ့လည်၂ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မုံရွာမြို့ရှိ အထက (၂) အတွင်းရှိ နမဝတန်းဆောင်တွင် ဝရံတာ ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လိုသိရပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိတဲ့ ကျောင်းသူ/သား (၁၅) ဦးရှိပါတယ်တဲ့။ ဒဏ်ရာ (၂) ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေ ရှိပါတယ်လို သတင်းရရှိပါတယ်။
ကျောင်းသူနှစ်ဦးက တော့ စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းက “ကျတော်တို့ ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ရောက်နေတော့ လာကြည့်နေချိန်ကြောင့်ပါ” ဒဏ်ရာရတဲ့ သူတွေကို လောလောဆယ် မုံရွာပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးမှာ ကုသပေးနေပါတယ်။
အချို့ကိုတော့ မန္တလေးကို ပို့ပြီး ကုသမယ်ဖြစ်ကြောင်း မုံရွာခရိုင်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ ကျောင်းသား တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက အငြိမ်းယူတော့မှာကြောင့် နုတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ခန်းပြင်ပ စည်ကားတာလဲ တိုက်ဆိုင်သွားလို့ ဖြစ်မှာပါ ဟု ၎င်းကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၂)ဦးကို မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
at 7/24/2012 03:25:00 PM
▼ 07/22 - 07/29 (152)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ဒေသခံများ အား...
တောင်ကျရေများကြောင့် လားရှိုးမြို့ အ၀င်နှင့် အထွက် ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ပွင့်လင်းမြင်စွာ စုံစမ်းရန် က...
ထိုင်းတွင် သေနတ်ပစ် ခံရ၍ မြန်မာ နှစ်ဦး သေဆုံး
၈၈ မျိုးဆက်နှင့် အမေရိကန် သံရုံး ပထမအတွင်းဝန်တွေ့ဆ...
ရွေးကောက်ပွဲ စံနစ်ပြောင်းဖို့ ၁ဝ ပါတီတင်ပြ
လယ်သမားနဲ့ စစ်တပ်ပြဿနာ ဝန်ကြီး သွားရောက်ဖျန်ဖြေ
ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဆောင်းပါး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ခေါ်...
ကချင်နှင့်အစိုးရ ပဋိပက္ခကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေ...
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် အစိုးရအား KIO ထပ်မံ အဆိုပြု
အငြင်းပွားဖွယ် ပိုက်လိုင်းကြီး နှစ်ခု
ဆင်ခရွန်ကကိုလတ်နဲ့ ၂၀၁၂ စင်ကာပူ၊ မြန်မာအခြေအနေ
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူတွေက ကျားမြီး ဆွဲသူတွေလဲ ????
ဘယ်သူ့အတွက် တပ်မတော်လဲ ???
လယ်ယာမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ လယ်/ဆည် ၀န်ကြီး ပြည်ထောင်စု...
“ဒီမိုကရေစီ အာဏာရှင် မဖြစ်ရေး” သူရဦးရွှေမန်း သတိပေး...
မိန်းကလေးများ အထူးသတိထားရမည့် ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်း
လုံခြုံရေးတပ် စစ်ဆေးမှုဒဏ်ဖြင့် မြောက်ဦး ဒေသခံတဦး...
ဆရာထူးကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ (အပိုင်း ၃)
ဆရာထူးကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ (အပိုင်း ၂)
ABSDF ဥက္ကဌဟောင်းများ အဖွဲ့ မြန်မာပြည်သွားလေ့လာမယ်
ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း Gtalk သုံးမရ
အိုလံပစ် ၀င်ပြိုင်ဖို့ လန်ဒန်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ့ အာ...
ရထားဝန်ကြီး၏ တောင်းဆိုချက်ကို ခွန်ထွန်းဦး အာမခံချ...
ကမ္ဘာ့မူဆလင်အဖွဲ့ကြီးက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ စာပို့
ကချင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး KIA ခေါင်းဆောင်များတွင်သာ မ...
အိုလံပစ် ပွဲတော်မှ မြန်မာအလံ
အံ့သြဖွယ်ရာ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးမှု
မြ၀တီမြို့ ရွှေ ၂ ပိဿာ ဓားပြမှုမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ယူဆရ...
မန္တလေးမှာ ချောင်ထိုးခံထားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ...
ကောင်းမွန်သာယာလှပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်တစ်ခုကို လ...
AIDS ဖဲကြိုးနီဆု မြန်မာနိုင်ငံက The Help အဖွဲ့ရရှိ...
AIDS ရောဂါအပေါ် အမြင်မှန်ဖို့ ဒေါ်စုတိုက်တွန်း
အောက်ခြေက မပြောင်းဘူးတဲ့လား (၁)
Bar Camp Xတွင် ခေါင်းစဉ် ၃ ခုဖြင့် အဓိကထား ဆွေးနွေ...
ဒကာမလေး ဝေနှင်းနှင့် အမြင်ဖလှယ်ခြင်း
စိတ်ကြွဆေး သိန်း ၉,၀၀၀ ဖိုး မြစ်ကြီးနားမှာ မိ
စိတ်ဖိစီးမှု ကို အမြန်ဆုံး လျှော့ချနိုင်သော နည်းလမ်...
အစိုးရအဖွဲ့တွင်း အပြောင်းအလဲ စတင်
မြန်မာကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဆက်ထားခွင့် ထိုင်း ခွင်...
ပါကစ္စတန် လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် ဗီဇာ အငြင်းပယ်ခံ...
ရွှေည၀ါဆရာတော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ စတင်ခရီးထွက်...
မြမင်းအောင်(၁)ရှပ်ပြေးရေယာဉ် ၀န်ချီစက်ဖြင့် ဆွဲတင်...
အဆိုတော်၊ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သဇင် အားအနုပညာလုပ်ငန်း...
ကေအိုင်အေအဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ...
"ရေအောက် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်းသစ် ချိတ်ဆက်ရေး ဘင်္ဂလားဒေ...
အပြစ်ပေးလျှင် ခံမည်ဟု ဦးအောင်သိန်းလင်း ပြော
လွှတ်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပထမဆုံးဆွေးနွေးချ...
သမ္မတနဲ့တွေ့ရင် ၈၈ မျိုးဆက် ဘာပြောမလဲ
မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ပိုင် မြေအတွင်းရှိ ကျူးကျော်နေအိမ်မ...
ဗိုလ်ကြီး ကိုကိုပိုင်ရဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားများအပေါ် ကိုယ်...
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး တာဝန်ရှိသူများ အကူအညီပေးရန် မော...
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ.... သိပါလေစ...။
NLD ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ထောင်ကျော် တက်ဖုိ့ရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗြိတိန်အမတ်တွေ ဆွေးနွေး
မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြော...
ဦးအောင်သိန်းလင်းက တရုတ်သတင်းစာဖော်ပြချက်ကို ငြင်း...
ခရိုနီများရဲ့ ရှေ့ခရီး (မောင်ဝံသ)
သေမင်းကို အသိပေးဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ မွေးနေ့ရှင်..
တတ်ကြွလန်းဆန်းသော ဟန်မာန်အပြည့်နဲ့ မြန်မာ့အလင်း မျ...
မန္တလာသူမန္တလာသားတွေ ယာဉ်မောင်းတော်တဲ့ အကြောင်း
မပြောချင်ဘဲ ပြောရတော့မယ် ကိုရွှေ လ၀က တို့ရယ်....
ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ NLD မှ ပထမ...
ပြည်ပခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို အာရုံထားသလို အ...
အကုန်ရရင်ရ မရရင်ဘာမှမလိုချင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ထိုင်း အနုလက်ရာများအားလေ့လာ